Aasaaska Shiinaha Liyuus Liquid Aasaaska 8 midab oo aan miisaan lahayn 30ml oo leh kareem dabiici ah oo dabiici ah iyo warshadda Foulada ee Moisturizing | Jinfuya
Tani Hay'adda dareeraha ah ee Silky waa miisaanka aan lahayn, jilicsanaanta jilicsan, muuqaalka caanobooraha qoyaanka ah, waxay kaa caawin kartaa sameynta a makeup aasaaska creamy iyo ma noqon doono been abuur ah halka wajiga xiran.
Shayga MAYA 19
Dhismo Kareem, Jilicsan, Silky
Ku habboon 8 hoos oo laga heli karo keydka, midab kale ayaa noqon kara OEM
Macluumaadka saafiga ah 1.01 fl oz. (30mL)
Shaqaynta Qari daloolada, Xakamaynta Saliida, Si fiican ugu dhex darista maqaarka dabiiciga ah, qaacidada caanaha waxay ka caawisaa sidii loo mari lahaa wajiga si habsami leh.
Aasaaskayagu wuxuu si fiican isugu daraa fikradaha daryeelka iyo fikradaha qurxinta hal saamayn oo la isku qurxiyo. Waxay leedahay qaab jilicsan, jilicsan, jilicsan oo sahlan oo la riixo, muddo dheer soconaya oo dhalaalaya, oo soo saareysa isla maqaarka dhalaalaya maalintii oo dhan, iyada oo ka sheekeynaysa muuqaal dabiici ah oo hufan oo hufan. Aasaaskani wuxuu si fiican u arki karaa daloolada, mana aha mid dufan. Waxay ku dhalaashaa maqaarka isla markiiba, iyo qurxinta aan iin lahayn waxay umuuqataa qoyaan iyo dabiici maalintii oo dhan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ka takhalusto cinwaanka "wajiga been abuurka ah" oo aad dabiici ahaan u qurux badnaato.
Luminous Silk Foundation wuxuu ku daraa midabbo saafi ah oo aad u yar, maaddooyin nadiif ah oo si fiican loo shiiday dheecaanka, qaab-dhismeedka aan duubnayn ee muujiya iftiinka dabiiciga ah ee maqaarka.
1.Lightweight, waxay bixisaa caqabad jireed oo ka hortagta qorraxda iyo wasakheynta oo socota maalinta oo dhan.
Dhammaadka Satin, muuqaal aad u iftiimaya & muuqaal caafimaad leh.
3. Muuji iftiinkaaga gudaha ah. Waxaa dhiirigaliyay xariir jilicsan, The Fabric of Emperors, aasaaskan dhalaalaya wuxuu ku dul duulayaa si miisaan la'aan iftiinka aan tooska ahayn ee ka soo baxa gudaha. wuxuu hagaajiyaa qaab dhismeedka wuxuuna khaldamaa cilladaha.
Hore: Matter Liid la'aan saliid-liidasho Aasaaska Bixinta caymiska buuxa 20ml aasaaska qurxinta ee waara oo leh SPF15
Xiga: OEM otomaatiga qalin qalin qumman Macdanta Dabiiciga ah Raadinta 3 qalin midab qalin leh burush
Hay'adda dareeraha ah ee Silky
OEM Face Samee-Fixer buufiyo 120ml qoyaan ...
Muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka sare ...